Author Topic: ဟာသဥာဏ်စမ်း အမေး/အဖြေ (Read 165641 times)
« Reply #180 on: June 14, 2011, 02:31:02 PM »
(၁၃)မိန်းမမှာ ညီမတွေရှိရင် သတိထားပေရော့ဆိုတဲ့မြို့
ဒီလောက်ပဲ ဖြေနိုင်တဲ့ .....
(၁၆) ရုံးသွားကျောင်းသွားသတိထား ဒါတွေယူကွယ့်မမေ့နဲ့တဲ့... အဲ့ဒီမြို့
« Reply #181 on: June 14, 2011, 06:21:53 PM »
နံပါတ် ၂၇ နဲ့ ၃၀ ကတော့ မဖြေပါနဲ့တော့ မေးခွန်းကသိပ် အဓိပ္ပါယ်မပေါ်လို့ . . .၃၀က ပင်လယ်ဝမြို့ရှိတယ်မှတ်လို့ အမှန်က ပလက်ဝဘဲရှိတာ ကျွန်တော်မှားသွားတာ . . .
၂၇ က လပ္ပတ္တာကိုဖွက်တာပါ . . .လက်သုတ်ဝတ်လိုဟာဆိုတော့ လက်ကိုပွတ်တာဘဲဆိုတာနဲ့ ဖွက်မိတာ . . .အဲဒါလဲသိပ်အဓိပ္ပါယ်မရှိလို့ တောင်းပန်ပါတယ် . . .
၂၄ က ကျောက်မဲနဲ့ ၃၁က ရွှေတောင်ပါ . . .ကျန်တာတွေတော့နောက်နေ့မှဘဲ ထပ်ပြောပြတော့မယ် . . .စိတ်ဝင်တစားဖြေပေးတာ ကျေးဇူးပါ
ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနဲ့ ပြီးသွားတော့လဲ ပြီးတာပါဘဲ . . .
« Reply #182 on: June 16, 2011, 12:34:40 PM »
Quote from: gawlibell on June 10, 2011, 02:14:05 PM
အပြင်းပြေဟာသဥာဏ်စမ်းလေးပါ i hope ppl like it
တစ်ခါက လယ်သမားတစ်ဦးသည် လယ်ထွန်နေရင်း လမ်းပေါ်မှာ မြင်းလှည်းတစ်စီး မှောက်သွားတာလှမ်းမြင်လိုက်ရသည်။လှည်းမောင်းလာတဲ့လူငယ်က မှောက်သွားတဲ့လှည်းကို အတင်းတွန်းမပြီးထူဖို့ကြိုးစားနေတာ ကိုတွေ့တော့အတော်ကြိုးစားတဲ့သူငယ်ပဲဟု တွေးမိသည်။ ကုန်ပစ္စည်းတွေအပြည့်တင်ထားတော့ သူတစ်ယောက်ထဲတော့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။သွားကူရမယ်။ ဒါပေမယ့် ထမင်းစားချိန်ဆို
တော့ ဒီသူငယ်ကို ထမင်းကျွေးပြီးမှ ၀ိုင်းကူမပေးမယ်လို့ စဉ်းစားပြီး ထမင်းစားဖို့လှမ်းခေါ်လိုက်သည်။
" ဟေ့သူငယ် မင်းအလုပ်ခဏနားပါလားကွာ။ငါနဲ့အတူထမင်းလာစားပါလား"
လူငယ်ကဘာမှပြန်မပြောပဲခေါင်းခါပြ၏။လယ်သမားကြီးက အထပ်ထပ်အခါခါခေါ်လည်း ခေါင်းခါမြဲခါနေသောကြောင့်
'' ထမင်းမဆာဘူးလားကွာ။နေ့လည်စာစားချိန်တောင် ကျော်တော့မယ်"
ဒီတော့မှလူငယ်က " ကျွန်တော်ကတော့ စားချင်ပါတယ်။အဖေကတော့ ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး" လို့ပြန်ပြောလေသည်။
ကြည့်စမ်း။ အတော်မွေးရကျိုးနပ်တဲ့သူငယ်။လိမ္မာရေးခြားရှိလိုက်တာ။အဖေကိုလည်း ကြောက်ရွံ့ရိုသေ
ထမင်းစားပြီး ရေနွေးကြမ်းသောက်ဖို့ခေါ်တော့လည်း အဖေကတော့ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။အချိုတည်းဖို့ခေါ်တော့လည်း အဖေကတော့ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ နေပူပါတယ်တရေးတမောနားပြီးမှ လုပ်တာပေါ့လို့ ပြောတော့လည်း အဖေကြိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ဒီလိုနဲ့ ညနေစောင်းတော့ လှည်းကိုပြန်ထောင်ဖို့သွားရင်း လယ်သမားဦးကြီးက
" ဒါနဲ့ မင်းအဖေကဘယ်မှာလဲ"
လူငယ်က -------------- အဲသလိုဖြေလိုက်၏။
လှည်းအောက်မှာ ရှိတဲ့သူ ကတော့ အဲလိုမျိုးသွားရင် ကြိုက်မှာမဟုတ်ပါ
လူငယ်က "ကျွန်တော့အဖေ က လှည်းအောက်မှာပါ ခင်ဗျား။" အဲသလိုဖြေလိုက်၏။
« Reply #183 on: June 17, 2011, 07:59:06 AM »
သံတွဲ (တွဲ=၁၂) (ရခိုင်)
ကူမဲ (မဲ=မယ်) (မန်း)
ငပုတော (ဧရာဝတီ) //ထင်တာပဲဗျာ
ငဖဲ (ငါးဖဲ) (မကွေး)
ဆင်တဲ ၊ လှည်းကူး //သေချာမသိပါ။
မေးခွန်းများသည် နှစ်သက်စရာ အလွန်ကောင်းပါတယ် ...
အမေး/အဖြေကို စိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့ .....
(၃၇) ပိတ်လှောင်ခံထားရတဲ့မြို့ က ဘယ်မြို့လဲ။
« Last Edit: June 17, 2011, 08:01:18 AM by zero0 »
« Reply #184 on: June 17, 2011, 08:08:01 AM »
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ မြို့များထဲက ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့
မြို့များကို တွေ့ရပါတယ် ... သိရင် ဖြေပေးပါဦးလားဗျာ ...
« Reply #185 on: June 20, 2011, 09:29:05 AM »
Quote from: zero0 on June 17, 2011, 07:59:06 AM
ပုသိမ် (ဧရာဝတီ) //ပြန်ဖြေတာပါ။ ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ပုတယ်၊ သိမ်တယ်။
(၃၃) ကိုတော့ စဉ်းစားနေဆဲပါဗျာ ... အဖြေကြပ်နေတယ် ...
မေးခွန်းများကို စိတ်ဝင်စားလျက် .....
« Reply #186 on: June 21, 2011, 10:54:20 AM »
ဗဟုသုတလေးတွေကို အမှား / အမှန် ပုံစံလေးနဲ့ ဖော်ပြထားပါတယ် ။
၁ ။ ပင်လယ်ဂဏာန်း၏ သွားများသည် အစာအိမ်ထဲတွင်ရှိသည်။ (မှား /မှန်)
၂ ။ လင်းပိုင်တွင် သွား (96) ချောင်း၇ှိသောကြောင့် အစာများကို ဝါးစားနိုင်သည် ။ (မှား /မှန်)
၃ ။ ကီဝီငှက်၏ မျက်လုံးသည် အလွန်အားကောင်းသောကြောင့် ညအမှောင်ထဲတွင် ကောင်းစွာ ပျံသန်းနိုင်သည် ။ (မှား /မှန်)
၄ ။ သပိတ်လွယ်ငှက်သည် တီကောင်များ၏ သွားလာသံကိုပင်ကြားနိုင်လောက်အောင် နားပါသည့် ငှက်ဖြစ်သည် ။ (မှား /မှန်)
၅။ လိပ်ပြာတွင် လျှာမရှိပါ ။ (မှား /မှန်)
« Reply #187 on: June 27, 2011, 11:46:47 AM »
အချစ်တက္ကသိုလ်မှာ တက်နေတာလည်း ကြာပြီ. . .Post လည်း တစ်ခုမှ မတင်ဖူးသေးဘူး. . ဆိုတော့.. .မဟုတ်သေးဘူး. . ဒါကြောင့် ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဒီဟာသအမေးအဖြေလေးတွေ တင်လိုက်မယ်ဗျာ. . .ဒီ ဖိုရမ်မှာ ပထမဆုံး တင်ဖူးတဲ့ ပို့စ်မို့လို့ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါဗျို့. . .
နွားမမှာ ၄ ခု မိန်းမမှာ ၂ ခု . . .ဘာလဲ?
« Reply #188 on: June 27, 2011, 11:47:54 AM »
ကျနော်ဟာ ရှည်ရှည်မျောမျောကြီး. . . ကျနော့်ထဲကဘဲ အရာဝတ္ထုတွေ ထွက်လာတယ်. . အထဲကို ပြန်ဝင်ရင် ပျက်ဆီးသွားနိုင်တယ်. . .ကျနော်ဟာ ပူပူနွေးနွေးနဲ့ အထဲမှာတော့ မှောင်နေတယ်. . . ကျနော်က ဘာလဲ?
« Reply #189 on: June 27, 2011, 11:49:33 AM »
ယောက်ျားတိုင်းမှာ ရှိတယ်. . .တချို့ယောက်ျားတွေရဲ့ဟာက တခြားယောက်ျားတွေထက် ပိုရှည်တယ်. . .ဘုန်းတော်ကြီးတွေကတော့ ဒါကို မသုံးဘူး. . .လက်ထပ်ပြီးရင် ယောက်ျားက မိန်းမကို အဲ့ဒါပေးတယ်. . .ဘာလဲ?